‘म्यानेजमेन्ट स्कलर्स’ म्यागेजिन विमोचन – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
मुख्य समाचार शिक्षा सूचना प्रविधि
काठमाडौँ, ६ वैशाख, २०७६ । दीगो विकासको विषयलाई समेटी विद्यार्थी म्यागेजिन ‘म्यानेजमेन्ट स्कलर्स’ को सातौँ अङ्क आज विमोचन गरिएको छ । काठमाडौँको पुतलीसडकस्थित कान्तिपुर सिटी कलेजमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रमकाबीच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णराज बी.सी.ले म्यागेजिनको विमोचन गरे ।
विमोचनपछि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि बी.सी.ले सरकारले चाँडै नै अनुसन्धान र प्रयोगात्मक ढाँचाको नयाँ शिक्षा प्रणाली देशभर लागु गर्ने तयारी गरिरहेको बताए । उनले प्राज्ञिक अनुसन्धानलाई व्यावसायिक क्षेत्रसँग पनि तादम्य मिलाउनुपर्ने कुरामा जोड दिए ।
वरिष्ठ पत्रकार तथा प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मीले डिजिटल युगमा पनि यस किसिमका म्यागेजिनको महत्वमाथि प्रकाश पारेका थिए । कलेजका का.मु. प्रधानाध्यापक राजु कट्टेलले विद्यार्थी तहबाट भएको यस प्रयासको सराहना गर्दै यसले शैक्षिक गुणस्तर र विद्यार्थीलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि फाइदा हुने बताए ।
इतिहासकार तथा कलेजका संस्थापक हेमन्त समशेर राणाको सभापतित्वमा आयोजित कार्यक्रममा कलेजका तर्फबाट अध्यक्ष सुमन कटवाल, प्रबन्ध निर्देशक डा. प्रल्हाद कार्की, सञ्चालक निर्देशक मिना कार्की, प्रमुख प्रशासक राजीव तिमल्सिना तथा बीबीएका कार्यक्रम संयोजक अम्बिका देउजा कुँवरले सम्बोधन गरेका थिए ।
कान्तिपुर सिटी कलेजमा बीबीए कार्यक्रममा अध्ययरत २०१४ ब्याचका विद्यार्थीद्वय सुनिता थापा र मनिला कार्कीको संयोजकत्वमा यस म्यागेजिनको प्रकाशन भएको हो ।
Tagged कान्तिपुर सिटी कलेज म्यागजिन
मिथिला प्रदेशका अभियन्ता : जीतबहादुर रायमाझी ‘मैथिल’
Tags: कान्तिपुर सिटी कलेज, म्यागजिन